စင်ကာပူ က Marina Barrage ဆိုတဲ့ အဆင့်ဆင့်ရေကာတာ ဆည် II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » စင်ကာပူ က Marina Barrage ဆိုတဲ့ အဆင့်ဆင့်ရေကာတာ ဆည် II
စင်ကာပူ က Marina Barrage ဆိုတဲ့ အဆင့်ဆင့်ရေကာတာ ဆည် II
Posted by Kyaemon on Jun 2, 2012 in Education, Style & Beauty, Think Different, Think Tank, Travel |4comments
Mr Yap Kheng Guan (PUB’s Director of 3P Network and Project Director of Marina Barrage) received the prestigious Superior Achievement Award for Marina Barrage from Ms Debra R. Reinhart (President of American Academy of Environmental Engineers (AAEE))
ကမ်ဘာ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အင်ဂျင်နီယာ အသင်း အမျိုးသမီး ဥက်ကဌ က Marina Barrage ဒိုင်ရိုက်တာ Yap Kheng Guan အား ပဌမ ဆုချီးမြှင့်စဉ်
စင်ကာပူ က Marina Barrage မာရင်းနား ဘာရဂ် ကို ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ ၃၁ နေ့မှာ ဖွင့်လှစ် တာ၊
၄င်းနေရာတခုလုံး ဟာ “ပင်လယ်” ကနေ “ကုန်းမြေ ” ဖြစ်လာအောင် ရယူလုပ်ဆောင်တာ သိရင်
(ဟောင်ကောင် မှာလဲ ဒီလိုဘဲ ပင်လယ်ကနေ မြေတွေရယူတိုးချဲ့ကြတာ)
စင်ကာပူရဲ့ ၆ ပိုင်း ၁ ပိုင်း (၁၆.၆%) အကျယ်အဝန်း ရှိတယ် လို့ဖော်ပြထားတာ၊
ပင်လယ်မှ ရေငန် တွေကို ရေချို ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေး သန့်စင်တဲ့ စက် ကြီးများလဲရှိတာ၊
တစက်ကန့် ဆိုရင် ၂၈၀ ကူဗ မီတာနှုန်းနဲ့
ပင်လယ်ဘက်သို့စုတ်ထုတ်တဲ့ရေစုတ်စက်ကြီး ၇ လုံးရှိတာ
Marina Barrage – desalination and sustainable building
Link လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့ ခေါင်းစဉ်ပေါ်က အမျိုးအစားအလိုက် ထပ်နှိပ်ပါ၊
Marina Barrage – Photo Gallery
အပေါ်က ယပ်တောင် အ “က” နဲ့ လူတသိုက်ဟာ
ဒီခေါင်မိုးပေါ်မှာ စိုက်ထားတဲ့မြက်ခင်း ပေါ် “က” နေကြတာပါ၊
Marina Barrage တခုလုံး အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ပေးတာက ဤနေရာ ပါ
မြင်တဲ့အတိုင်း နေရောင်ခြည် သံပြားတွေ နဲ့ပါ၊
ဒီရေကာတာ က ပင်လယ်ရေ တက်မလာဘို့ မိုးရေ အပိုတွေကိုထုတ်ပစ်ဘို့ နဲ့ရေသိုလှောင်ဘို့ ပါ၊
၁၉၆၉ တုန်းက မြို့ထဲမှာ ရေကြီးခဲ့တဲ့ ရှူခင်း တွေ
Photos of Marina Barrage | AsiaIsGreen
ဗီဒီယိုက ပုံတွေ နဲ့ ရှင်းလင်းသွား တာ၊ Link လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ
Eunice Khong ရဲ့ရိုက်ချက်များ အရမ်းလှပတဲ့ ညရှူခင်းတွေပါ
Marina Barrage |How to go? |Uniquely Singapore Attraction |Photos @ Travel Blog Singapore
Eunice Khong is the founder and editor of TravelerFolio,atravel blog made in Singapore in 2008.
Cecil Lee said on February 28, 2009 12:56 am
Maria said on March 1, 2009 11:20 am
ခုမှ နိုင်ငံတလွှားက ဆည်တွေကို မြင်ဖူးတော့တာ
စင်္ကပူရှုခင်းအလှတွေကို ညဘက်ပဲ အသားပေးရိုက်တတ်ကြသလားမသိနော..
ကိုကြေးမုံပါဗျ။မှန့် ဟုတ်ပါဘူး အူးဗိုက်ရ။
ဟိုလူတွေ ယပ်တောင်တွေနဲ့ ကနေတဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်မှာ
ချစ်သူလေး ကို ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်မှာ မှီစေထားပြီး
ရေပြင်ကို ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ လေပြေအေးလေးကို တစ်ဝရှူရင်း
သူ့ ကို ချစ်တဲ့စကားတွေ အထပ်ထပ်ပြောပြချင်တာဗျာ
မှတ်ချက်တွေ ထင်မြင်ချက်တွေ ပေးကြတာကို